Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Isku-dhafka Chicken New Texas oo ka dhigaya mid weyn Cambodia
Texas Chicken, oo ah mid ka mid ah silsiladaha digaagga makhaayadda ee ugu weyn adduunka, waxay sii waddaa inay dhadhankeeda geesinimada leh ee Texas u keento Cambodia oo dhowaan furtay meesha ugu cusub. Makhaayada oo ku taal Monivong Blvd., Sangkat Srah Chok, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia, ayaa loo furay dadweynaha Isniintii, Oktoobar 4, 2021. Texas Chicken franchisee TH F&B Co. Ltd. ayaa leh oo maamusha goobta.
"Waan ku faraxsanahay inaan sii wadno inaan sii kordhino joogitaankayaga gobolka Asia-Pacific, anagoo keenaya dhadhankayaga Texas ee geesinimada leh ee deganayaasha iyo booqdayaasha," ayuu yiri Russ Sumrall, Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare, Horumarinta Istaraatiijiyada Caalamiga ah ee franchisor of Texas Chicken TM brand. "Taageerayaasheena waxay sii wadaan inay muujiyaan jacaylkooda iyo daacadnimadooda sumaddeena, waxaanan ku hanweynahay in aanu keenno saxeexayada digaagga gacanta lagu tumay iyo laba-roodhida, buskud subag-malab ah oo cusub oo la dubay, iyo dhinacyo guri-guri ah oo loo keeno bulshooyin badan oo adduunka ah. Aqoonta iyo waayo-aragnimada F&B ee suuqa iyo gudaha warshadaha adeegga cuntada ayaa ah kuwo aad u qiimo badan waxayna gacan ka geysan doontaa gacan ka geysata firfircoonidayada Cambodia."
Heshiiska ganacsi ee gaarka ah ee TH F&B Co. Ltd, ee lagu dhawaaqay sanadkii hore, wuxuu sii wadaa inuu guulaysto maadaama goobo cusub oo Texas Chicken lagu daray. Heshiisku wuxuu ka faa'iidaysanayaa kaabayaasha jira ee TH F&B iyo khibradda hawlgallada ee maaraynta in ka badan 10 nooc oo F&B caalami ah oo Cambodia ah.
Texas Chicken waxay hadda ku leedahay shan goobood oo Cambodia ah kuwaas oo ku yaala Phnom Penh oo dhan iyadoo qaar badan oo kale la qorsheeyay iyadoo Texas Chicken ay sii wado inay u keento dhadhanka dhadhanka dhadhanka leh ee Texas Cambodia iyo adduunka.